Nnukwu ire ere bịara! Ronsco nyere 5%-20% ego maka Nickel Alloy-Company News-Hunan Allianz Metal Products Co., Ltd.
Oge: 2021-03-18 HITS: 6
Ahịrị niile dị na Ronsco na-ere ya na mbelata 5%-20%, gụnyere Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy, na ndị ọzọ. Anyị na-enye ọnụahịa ọkwa ụlọ ọrụ maka mmadụ niile Nickel Alloy ngwaahịa dị ka Nickel Alloy + Super Austrian(713c, K500, 718, Nimonic c-263, Incoloy901, 904L )Pipe, okirikiri mmanya na forgings. Mbupu gaa ebe ọ bụla n'ụwa na usoro njem na-agbanwe agbanwe.
Uru Alloy Anyị:
Mgbe afọ 22 nke mmepe gasịrị, azụmahịa anyị toro ma tolite site na ụlọ ọrụ ọdịnala gaa na mpaghara teknụzụ ọhụrụ ndị ọzọ dị ka mmanụ na petrochemical, ike ọhụrụ, ọgwụ ndụ, nkwukọrịta elektrọnik, injinia igwe, mbupu pụrụ iche, njem ụgbọ oloko, ụgbọ elu na ikuku.Ronsco nwere ikike ọla pụrụ iche pụrụ iche nke mba ụwa, gụnyere German ALD 6 tọn nke ikuku induction ọkụ, tọn ọkụ ọkụ na-eri 6, tọn 18 nke ikuku nchebe ingot ọkụ ọkụ electroslag na 1 ton vacuum induction furnace, tọn 3 nke ọkụ ọkụ electroslag, 18. nke kpọpụrụ ingot electroslag ọkụ, na 20 tọn Ọ BỤRỤ na ọkụ / ọkụ na-eme ka ọ dị ọcha / AOD / LF / VOD refining production line, 25MN / 8MN ngwa ngwa na-ekpu igwe, 450/320 igwe igwe na-atụgharị na ihe ndị ọzọ.
Anyị na-ewukwa ogologo okwu mmekọrịta na ụwa ama emepụta dị ka OUTOKUMPU, SMC, ATI, Haynes, Nippon Yakin na KOBELCO, TISCO, BAOSTEEL.Ndị otu RONSCO etoola ihe karịrị ndị ọrụ 500 bụ ndị ọkachamara na ngwaahịa nchara pụrụ iche, na-enwe ngwaahịa mgbe niile maka ihe karịrị 1000 ton n'afọ niile, gụnyere igwe anaghị agba nchara & ọkpọkọ enweghị nkebi, ọkpọkọ ọkpọkọ, igwe anaghị agba nchara, na ngwaahịa na-akpụ akpụ. Anyị isi akara ule nke pụrụ iche ígwè nwere 253MA, duplex 2205, super duplex 2507, nimonic 80A, nimonic 105, inconel600, inconel625, incoloy800,800H,800HT, incoloy825, hastelloyc276, valvụ wdg. ga-abụ n'ime ụbọchị 36 maka ngwaahịa nkịtị. Anyị na-enyekwa ọrụ ahaziri ahazi na imepụta ihe, dị ka ịkụ ọkpọ, tangential, igwe ọnụ na ịgbado ọkụ wdg.
Mbelata a na-arụ ọrụ ruo Eprel 17